Senethiwekhi kwezemfundo - indlela eziyinkimbinkimbi ngawo kukhona ukuzibandakanya izinhlangano eziningana e inqubo yemfundo noma ukuvala-ihora.
Kuyinto yemizamo ezikhungweni ezahlukene zemfundo ukuze hlanganisa imithombo. Lokhu algorithm kakade iye yabonisa ngokuhlathulula ukusebenza kwawo kanye nokusebenza. Senethiwekhi izikhungo zemfundo kudinga obukhethekile nabantu, okusho ukuthi "indlela ekabili Umbuso indawo." Phakathi nabo bonke ababambe iqhaza lokhu ukuxhumana avele oxhumana lengakahleleki kantsi esisemthethweni. Senethiwekhi ohlelweni lwezemfundo ikakhulukazi ithuthukiswe esikoleni maphakathi kanye eliphezulu.
Lapho efundisa umkhuba imiqondo ezifana ubambiswano, inethiwekhi, kukhona lalivamile. Inethiwekhi iqoqo izikhungo. Phawula umlingisi lomasango ezakhiwe ohlelweni.
Senethiwekhi kwetinhlavu - is indlela ukuthi unamapharamitha ezithile ezifana:
izinsiza ezithile ukuze siyifinyelele;
Model networking emfundweni kuxhomeke kulokho izinsiza lizokwabiwa. Injongo eyinhloko ukufeza uhlelo agcwele injongo ayehlosile kwasekuqaleni. Kuye ngalokho izinkinga networking emfundweni akhethiwe njengoba eziyisisekelo ohlelweni wadala ngokuxhuma izinhlobo ezithile ezikhungweni zemfundo. The main ebusayo ngokuyisisekelo izenzo zokuphatha wesifunda noma idolobha.
Izinkinga main networking emfundweni ezihlobene ne remoteness eningi indawo izinhlangano ezehlukene zemfundo. Ukuze unqobe ubuchwepheshe computer eyasetshenziswa izinkinga ezifanayo.
Ngokukhethekile unikezwa ukusebenza nezingane abanezinkinga ezinkulu zempilo. Abafundi abanjalo ngezizathu zezokwelapha akakwazi ukuya esikoleni, ngakho-project ekhethekile sidaliwe ngabo-Ministry of Education yeRussia. Luhilela networking e imfundo ehlanganisa. Othisha ukuxhumana ezigcemeni zabo ngokusebenzisa ikhompyutha ubuchwepheshe bamuva nesofthiwe. Ngaphambi uthisha uvunyelwe ukusebenza ingane egulayo, yazenzela ukuqeqeshwa okukhethekile Yiqiniso. Lezi izifundo ahloselwe zokunqoba izinkinga ezingokwengqondo ezihlobene ukufakwa ukuxhumana umfundi ogulayo.
Lubhekele ubudlelwano phakathi abafundi, abazali, othisha, izikhungo zemfundo ukunikeza isigaba ekhethekile nifundisana okufakayo (akude). Iyini i-algorithm yalesi ukuxhumana? Ekuqaleni, ochwepheshe umnyango esikoleni adlulisele ulwazi mayelana isibalo sezingane abadinga imfundo ibanga, ibonisa izincomo lodokotela bezifo zezingane kwi inhlangano inqubo yemfundo. Idatha etholwe maphakathi cwaningo ukubambisana wathola ulwazi kuyongenwa database ekhethekile. Esigabeni esilandelayo enganeni ngayinye ukukhetha umeluleki.
Ukuze uthisha uzosebenzisana ingane egulayo, ukubeka phambili izidingo eziqondene nayo. Ngaphezu zamakhono lochwepheshe, kufanele kube wezengqondo ezinhle e inqubo yokuxhumana nabadlali bakhe ukusiza ingane, ukuze amkhulule ukungaqiniseki emabuthweni, izakhiwo ezahlukene ezingavela ngenxa zokuxhumana elinganiselwe nontanga.
Isinyathelo sesithathu iyona Ukukhetha yohlelo lwemfundo, ukwamukelwa kwenkolelo-ogxilise.
zokuxhumana okunjalo kwezemfundo - iqoqo izinyathelo ezihlose ephethe izifundo kude abafundi imikhawulo impilo. Coordination Centre Idala ishejuli inethiwekhi lapho zonke izingane kuboniswe ngesikhathi esifundweni, utitjhere usebenza. Mfundisi uthola umsebenzi esikoleni, okuyinto unamathele ingane.
Algorithm ukuqasha othisha akude efana yokwamukela njalo ingcitshi ekubazeni wezemfundo. Headteacher wanikeza okuskeniwe ikhophi lokusebenzela, le isicelo sokuqala, ikhophi umklomelo amadokhumenti, ukuboshwa, isiqinisekiso ukudlula inkambo ukuqeqeshwa okukhethekile, tariff ishidi. I-nhloko wesikole ilungiselela umyalelo zisengela umsebenzi, emethula uthisha akude. Phela imicikilisho kusingathwa, uqala ukuqondisa inqubo yemfundo.
Lo msebenzi kudinga zokubika sina futhi ngezikhathi ezithile. Ekupheleni kwenyanga ngayinye, umqondisi Thishela ubuyisela umbiko izifundo. Ifomu esikhethekile Ukuhlunga ingxenye yesine, ngonyaka nengxenye, lapho thishela igcwalisa. Zonke izinto nokubika ethunyelwe ayiphoyinti, bese okubili ukuze semfundo lapho umntwana ibhalisiwe. UMthetho wezeMfundo zokuxhumana ulawula ubudlelwane phakathi umfundisi akude, abazali umfundi, abameleli Ministry of Education.
Senethiwekhi e imfundo eyengeziwe unamapharamitha ezithile:
Kusekelwe imisebenzi ahlangene abadala kanye nezingane;
kukhona umthelela ngokungaqondile noma ngqo yenqubo izinhlangano komunye nomunye, okuvumela ukuhlanganisa ngokugcwele therebetween;
kukhona kungenzeka ushintsho lwangempela e-ngokomzwelo, volitional, engqondweni yethu, sphere siqu;
acabangele izici siqu abahlanganyeli, ukuthuthukiswa kwamakhono social;
Isebenzisa izimiso bobuchule ukuzethemba, ukubambisana kanye silinganiso;
ukuxhumana isekelwe trust, ukwesekwa, futhi ngokubambisana mutual.
Izingosi of zemfundo ezengeziwe ikuvumela ukuba sihlanganise imizamo amakilabhu ahlukahlukene, izikole, izigaba, okuhloswe ngazo indlela abantu abakhuliswe ngayo ngokuvumelanayo athuthukile ubuntu ingane. Kanjani ukwakha njalo kwesimiso esinjalo? Iyini imigomo yayo esemqoka kanye nezinhloso? Njengoba sazi ukuthi ukuxhumana e nemfundo eyengeziwe okuhloswe ngazo ekudaleni isisekelo ukwakheka egcwele ubuntu bengane, ezindaweni lesifunda kanye emadolobheni amakhulu ase-izikhungo yenza izifundo zayo zokunezela avuleka. Ezinhlanganweni ndlela, izingane uphiwa ezihlukahlukene amaqembu ezemidlalo, umculo amakilabhu, umdanso studios. Lapho injected isikhungo ezinjalo, ingane kanye 'idolobha zezingane' abazali bakhe abasebenzi eyenziwa uhambo, inkulumo mayelana ohlangothini ngalunye, avunyelwe ukuya emakilasini. Uma ingane bakhetha ngamabomu lwezigaba 2-3 noma imibuthano, isimiso sakhe yakhiwe ukuze sekuyisikhathi ukuya esikoleni esiphakeme, ukubandakanya ezigabeni ekhethiwe. Izingosi of zemfundo ezengeziwe kuhilela ukushintsha isimiso imisebenzi yangemva kwesikole, ikhumbula isimiso kwetifundvo evamile (secondary school).
Isayensi yanamuhla inikeza izinhlelo ezimbili eziyinhloko nokuxhumana: mncintiswano nokubambisana. Cabangela izici zawo, isicelo amathuba.
ukuxhumana ngokuBambisana kudinga umnikelo othile wabo bonke abahlanganyeli netinhloso letifanako. Njengendlela inhlangano usesimweni esinjalo, abe anaka ubudlelwane ukuthi kwavela inqubo ngokushesha yokuxhumana mutual. Inkomba eyinhloko kwabantu ukuxhumana wokubambisana esivuna ukufakwa ezingeni zathu ezivamile bonke ababambe iqhaza ohlelweni lwezemfundo.
Umncintiswano kusho onilwelayo kuqala, ifomu eliqhakazile okuyinto isimo ingxabano. Akunjalo ngempela ukuthi ukungqubuzana kwadingeka imingcele ezimbi kuphela, ngokuvamile kusetshenziswa izimo ezinjalo kuyindlela yokuphuma kulesimo nzima, futhi umugqa ngokugcwele kuze kobungane nobudlelwane iqhaza ezahlukene inqubo yemfundo nokuqeqesha. Senethiwekhi emfundweni jikelele kuhlobene eduze amasu anjalo. Abakuchaza sekulingisa nokwakheka kwalo okwalandela.
Ngalesi sikhathi wadala ezahlukeneyo ezahlukene zokuxhumana imfundo kamasipala. Phakathi kwabo kukhona izinketho amabili ezivamile, ahlaziye kubo ngokuningiliziwe.
Yini inethiwekhi kwezemfundo? Kuyinto nokwenzeka ngokuhlanganisa nezinhlangano ezimbalwa ahlukene zemfundo emhlabeni isikole eqinile, ukuba nezinto ezibonakalayo ezanele futhi human resources. Lokhu semfundo inomsebenzi we "isisetshenziswa isikhungo". Kulesi simo, isikhungo ngasinye yemfundo iqembu nokulondoloza ilungelo ukuqinisekisa emfundisweni eyala bezemfundo eyisisekelo ngokugcwele. Ngaphezu kwalokho, esikoleni uyakwazi ukudala amakilasi ezikhethekile, ukunikeza izingane ezihlukahlukene izifundo kobuholi kanye ozikhethela e izifundo ezithile, banikezwe etholakalayo isisetshenziswa umthamo. Ukuqeqeshwa zonke ezinye izindawo core nokobana "Resource Center."
Kukhona enye zokuxhumana (ukwakheka ezengeziwe). School, ubuciko izigodlo, izikole ezemidlalo, studios, amakilabhu, isinyathelo kuleli cala njengoba uhlelo olulodwa zemfundo nokuqeqeshwa. Esimweni esinjalo, ingane inelungelo lokukhetha ukuthola amakhono ezengeziwe hhayi kuphela ngesisekelo esikoleni sabo, kodwa nakwezinye izikhungo zemfundo. Ngokwesibonelo, umfundi kungathatha yokufunda ibanga, cwaningo itoho esikoleni izingane onamakhono e sokufundela tekucecesha.
Senethiwekhi e imfundo professional kuletha imfundo. Okokuqala, lezi zinhlelo zidalwe yokuthuthukisa izinga lemfundo nokuqeqesha, ukhulise isithakazelo abafundi 'yobuchopho. Kukhona izici ezithile zomkhathi lapho isici wokufundisa iyiphi inethiwekhi sezemfundo:
khona izinto ezithandwa omunye futhi ufisa ukuxhumana abahlanganyeli izinjongo olulodwa kwezenhlalo, ukusebenzisa izindlela ezivamile futhi amasu;
yokudla, abantu, amathuba sezimali ukuze uthole imfundo mutual ukuqeqeshwa, ngemibono;
ukuthuthukiswa ukuxhumana phakathi kwelungu ngalinye inethiwekhi;
thakazelo kukho nobabili futhi wokuqinisekisa Dynamics omuhle walokhu nokuxhumana.
Isizathu eziyinhloko ezibangela i-inethiwekhi kwemiphakathi ehlukene kuye kwahlotshaniswa ukungakwazi izikhungo eziningi zemfundo encane ukuhlinzeka bonke abathintekayo kwezemfundo inqubo izimo okuphelele nokuthuthukiswa nemfundo. Okokuqala kwaba ukuntuleka imishini impahla kanye lobuchwepheshe izikole eziningi zasemakhaya, okuba nomthelela omubi imfundiso ngokwesayensi. Ngemva ukwethulwa imodeli inethiwekhi ukwazi ukubhekana nezinkinga isixazululekile ngamunye ejensi kahulumeni abakwazanga. Ngaphezu kwalokho, izinhlangano ngabanye ukuthi zifakwe uhlelo olulodwa, ukuqinisa umncintiswano enempilo, ukuze babe nobuhlobo evamile yebhizinisi. Sijulise kuvisisa inkinga owaphakanyiswa phambi Ministry of izikole Ezemfundo, ukunweba imingcele isinyathelo mutual, ngoba amathuba aye anda izikhungo zemfundo kakhulu ngaphezulu. Okwamanje, esikoleni, zenziwe kunethiwekhi eyodwa, zama ukusebenza iqembu, futhi ngisiza abanye iseluleko ngamunye, lwabasebenzi, izindlela lobuchwepheshe imfundo. Ukuvela namanethiwekhi amaningi imfundo nomthelela ukuqedwa ukuphindaphindeka ezingadingekile, imfucuza engenangqondo kwemithombo yezinto. Phakathi nalokho kubingelelana, bothishela babelana ngemibono, imibono, ezintsha amasu sekufundzisa nobuchwepheshe. Ngaphansi kwezimo ezithile, kukhona inhlangano yezimali, tekuphatsa, imitfombolusito yeluntfu. Ngokusebenzisa ukuhlaziya zokuxhumana zindlela ziye livikeleke izimiso eziyisisekelo indalo yayo ngekubambisana kutenhlalo amasu:
Yilelo nalelo lungu uthola ithuba elilinganayo ukunikeza imibono yabo;
umthwalo wemfanelo akudluliselwa nezinye izikhungo zemfundo;
naye kuphumelela ngosizo wonke amandla anikezwa nombala ziqondiswe ukusebenza ngokugcwele zonke izikhungo kanye izinhlangano zikahulumeni;
kukhona izimo nokubambisana okunenjongo futhi ezakhayo, ukuqapha nokulawula;
nokubambisana kusekelwe ikhono "thatha" futhi "ukunikeza."
Ukuze ukwakha inethiwekhi ukusebenza ngempumelelo, kubalulekile ukusekelwa njalo konke ukuxhumana ageleza, izingqungquthela, imihlangano ngokuhlanganyela kanye izingqungquthela.
Ngenxa zokuxhumana zezikhungo ahlukahlukene zemfundo kanye lokuchibiyela ohlelweni lwezemfundo ukukhiqiza amasu elilungile sekufundzisa evumela umsebenzi izinqubo zemfundo, ngcono ukusebenza kahle yabo nokuphumelela kwaleso sembatho. Ngenxa yalo msebenzi wenza kwaba nokwenzeka umklamo ephelele kokuqukethwe kwezemfundo nemfundo ukuthi kunomthelela kwandzisa yokuphila kwezingane, ebanikeza isipiliyoni ahlukahlukene omphakathi.
Umkhuba nokuxhumana okunjalo phakathi abahlanganyeli ezahlukene inqubo yemfundo kuqinisekisa ukubukeka izici eziningi ezintsha. Okokuqala, siphawula isidingo ukuze uthumele uhlobo yokuncintisana imisebenzi yesikole ukuze izimo ezintsha womsebenzi.
Ukuze inguquko esinjalo kudinga isikhathi eside isikhathi, a rethinking yemisebenzi yayo ngothisha. Imiphumela izifundo imininingwane ukuqinisekisa ukusebenza high zokuxhumana. imizamo ngokuhlanganyela okuhloswe ngazo ukuthuthukisa imvelo yokufunda kuphela, ukuthuthukisa izinga material futhi base lobuchwepheshe, ekuthuthukiseni emva-ihora lomsebenzi, zinganikeza elamukelekile. uhlelo enjalo kufanele ibe isisusa esikhulu self-ukuthuthukiswa asemasha zabantu baseRussia.
Ukuhlaziywa uhlelo lelandzisako. Amaphuzu amqoka
Uhlelo usebenza nezingane onamakhono izibalo for nyaka wezifundo
Kuyini iminyaka yokuphila leukocyte womuntu
Rads amaphutha League of Legends: yini okumele uyenze uma kukhona leli phutha?
Iqembu-antibiotic kanye nemiphumela engemihle yemithi elwa namagciwane,
Raspberry Ordinary lapho ikhula incazelo
Kuyini incwadi? Thina ukuphendula umbuzo